“Waxaa iga go’an la dagaalanka gudniinka Gabdhaha Soomaaliyeed ” Ifraax Axmad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
“Waxaa iga go’an la dagaalanka gudniinka Gabdhaha Soomaaliyeed ” Ifraax Axmad
Tuuryare 6 February 2021 7 February 2021
6 -da bisha February oo ah maalinta caalamiga ah ee ka hortaga gudniinka Gabdhaha ayaa Ifrah Foundation waxey deegaano badan oo dhaca dhulka Soomaalida ku qabatay barnaamijyo kala duwan oo looga hadlayo sidii loo cirib tiri lahaa.
Kulamada ayaa inta badan waxaa lagu casuumay dad mas’uuliyiin ah oo hadda katirsan xukuumadda Federalka Soomaaliya kuwa horay xilal u soo qabtay iyo waliba dad kale oo aqoonyahano ah.
Saraakiil Caafimaad ayaa sharaxday dhibaatada uu leeyahay FGM-ka, halka culumadana ay waalidiinta uga digeen in gabdhahooda ay jarjaraan taa oo ka soo horjeeda diinteena Suuban.
Ifraax Axmad ayaa sidoo kale si Online ah kulamo kala duwan ugu qeyb gashay maalintan caalamiga ah si bulshada loo wacyi geliyo islamarkana horumar laga sameeyo.
Ifraax ayaa sheegtay iney ka go’antahay ka shaqeynta in la ciribtiro gudniinka Fircooniga ee Soomaaliya iyadoo xustay markii ay howshan bilaabeysay iyo hadda in farqi weyn uu u dhaxeeyo islamarkana bulshada ay fahmeen dhibaatadiisa.
“ Markii aan bilaabayay la dagaanka gudniinka Fircooniga ee Soomaaliya dad badan ayaa naga soo horjeeday oo aan nagu taageersaneyn balse hadda dadkii wey ku baraarugeen, waxaana ku faraxsanahay inuu hadda hoos u dhacay gudniinka Fircooniga, waana sii wadi doonaa ilaa aan ka ciribtrino” Ifraax Axmad aas-aasaha hay’adda Ifrah Foundation oo ka shaqeysa arrimaha Haweenka, Bini’aadanimada iyo la dagaalanka FGM-ka.
Waxaa marqaati ma doonta ah in Ifraax Axmad ay ka hor tagtay jarjaridda xubnaha taranka gabadho yaryar ee Soomaaliyeed islamarkana hadda uusan aheyn sidii hore.
DEG DEG:-Dibad-baxyo looga horjeedo Axmed Madoobe oo bilowday
Madaxweyne Farmaajo “Waxaan diyaar u ahay fulinta heshiiskii 17-kii September”